Fampirantiana Security Shenzhen: fampiharana fiarovana radar an'ny motera vaovao-News-Hunan Nanoradar Science & Technology Co., Ltd.,
Fampisehoana Shenzhen Security: fampiharana radar amin'ny milina vaovao
Fotoana: 2017-11-09 Hits: 26
Tamin'ity taona ity CPSE Security Expo 2017 dia manana antsipirihany, ny radara solontenan'ny radar + fampidirana sary dia nanomboka niditra tao amin'ny trano heva an'ny orinasa lehibe, booth haikang, Dahua, institiota 38 an'ny CEC, izay mitondra famantarana? Androany dia mizara ny radara amin'ny sehatry ny fampiharana fiarovana izahay.
Voalohany, inona ny fiarovana fiarovana?
Amin'ny ankapobeny dia misy karazana fiarovana roa. Ny iray dia ny fiarovana perimeter. Ny tanjona lehibe indrindra dia ny fametrahana "rindrina miaro" tsy hita maso na tsy hita maso, amin'ny alàlan'ny fefy elektrika infrared, fefy elektronika ary radara onjam-peo milimetatra eo amin'ny faran'ny faritra arovana. Rehefa misy ny fanafihana tsy ara-dalàna izay voamarika dia mandefa famantarana fanairana ny mpitsikilo hanakanana ny mpiditra ary hampandre ny mpitandro ny filaminana hitantana azy ara-potoana.
Ny sokajy faharoa amin'ny fiarovana ny fiarovana dia filaminan'ny faritra, izay manondro ny fiarovana fiarovana ireo singa lehibe na tranobe amin'ny faritra midadasika toy ny faritry ny orinasa. Raha vantany vao misy olona iray na fiara iray manatona ny tanjona kendrena mba ho voaro, ny sensor dia afaka mamantatra ny tsy fetezana ary ny rafitra fanaraha-maso dia manome fambara fanairana ary mampandre ny mpiambina hiatrika izany.
Talohan'ny nandrosoana tsara ny siansa sy ny teknolojia, ny ankamaroan'ny toerana dia nametraka sakana fotsiny (toy ny fefy vy, fefy fefy, fefy sns) manodidina ny facade mba hisorohana ny fidirana an-tsokosoko tsy manara-dalàna ary nalamina ny mpiasa mba hiakatra hanao fisafoana. Amin'izao fotoana izao, matetika ny mpanao heloka bevava dia mampiasa siansa sy teknolojia mandroso ary sarotra kokoa ny fomba fanaovan-dratsy. Noho izany, ny fomba fisorohana nentim-paharazana dia sarotra ny mamaly ny filan'ny fiarovana amin'ny sampana lehibe sy ny singa lehibe.
Miaraka amin'ny fanitarana tsy tapaka ny tinady eny an-tsena, teknolojia fiarovana isan-karazany (toy ny programa taratra infrared, vahaolana fanaraha-maso an-tsary, vahaolana amin'ny tariby mamoaka, vahaolana tariby mihetsiketsika sns.) fandraisana anjara mendrika. Na izany aza, noho ny antony kendrena sasany dia mbola misy lesoka ihany ireo teknolojia ireo ary tsy afaka mahafeno ny fepetra takian'ny rafitra fiarovana izy ireo amin'ny toe-javatra vaovao. Mba hahafahana mamaly ny tena ilain'ny mpanjifa, dia nisy ny radar fiarovana milimetatra. Amin'ny maha teknolojia fiarovana vaovao azy, ny radar milimetatra dia manana tombony amin'ny teknolojia hafa tsy manam-paharoa amin'ny fiarovana fiarovana, izay nankafizin'ireo mpampiasa indostria ary nampalazaina haingana sy nampiharina.
Faharoa, ny vahaolana momba ny fiarovana.
Ny rafitra fiarovana arakaraka ny sakany sy ny toerana misy azy, dia azo zaraina ho sokajy roa, ny fiarovana ny vakim-paritra ary ny fiarovana ny faritra. Ireo karazany roa ireo dia mety misy irery na miaraka, arakaraka ny tontolon'ny fampiharana manokana. Ny fiasan'ny fiarovana perimeter dia ny fametrahana "rindrina fiarovana" mihidy manaraka ny faritry ny faritra arovana. Raha vao misy ny fanafihana tsy ara-dalàna dia manaitra avy hatrany ny rafitra fiarovana ary manosika ireo mpiambina hitantana azy ara-potoana. Raha ny fiarovana ny "key" no mampiavaka ny fiarovana ny faritra, ny rafitra fanaraha-maso ny fiarovana ny faritra kosa dia manara-maso ny faritra iray manontolo. Raha vao manatona ny tanjona kendrena ny olona iray na ny zavatra iray dia manome fampitandremana ny rafitra.
Amin'izao fotoana izao, ny rafitra fiarovana bebe kokoa an'ny perimeter ao an-trano sy any ivelany dia azo zaraina amin'ny karazany manaraka:
Karazan-jiro: fitifirana infrared, fitifirana laser;
Karazan-tariby: tariby mihetsiketsika, tariby mihetsika, tariby mivoaka;
Radarin'ny onja milimetatra;
CCTV dia rafitra fitandremana fiarovana azo antoka, indrindra fakan-tsary, mpanara-maso, sehatra fanaraha-maso, fitaovana video / playback sns. Ny rafitra fanaraha-maso CCTV dia matetika tsy toy ny fitaovana fanaraha-maso amin'ny fotoana tena izy, fa aorian'ny horonantsary fandefasana dia mizaha ny famantarana azo ampiasaina.
Ankoatr'izay, amin'ny hazavana manodidina, ny fomba fijery, ny fomba fijery, ny famahana ary ny anton-javatra hafa, ny rafitra fiarovana ny teknolojia fanaraha-maso ny horonantsary dia mitaky fomba fitadiavana hafa, mba hilalaovana fampisehoana tsara.
Ny lesoka lehibe amin'ny rafitra fanaraha-maso CCTV dia:
Tsy mahavita mamantatra ny fotoana tena izy, matetika dia miantso ny horonantsary avy eo ary mamantatra ireo famantarana.
Tsy afaka mandray andraikitra hitady ny toerana nanafika;
Ny elanelam-pitsikilovana dia kely, voakasiky ny toetr'andro, vokarin'ny hazavana;
Tsy azo atokisana ambany ny algorithm Alarm.
Rafitra fiarovana karazana hazavana, ny radio infrared no fitaovana fanombohana voalohany indrindra, ny fotokevitra iasany dia ny: amin'ny faritra detection napetraka tsiroaroa amin'ny sensor, mandefa sy mandray, ny fananganana rindrina fiarovana virtoaly, rehefa misy zavatra mandalo, manakana ny infrared Rehefa tsikaritry ny sensor fa mandray ny fiovan'ny hazavan'ny hazavana, ny famantarana ny output. Mba hampihenana ny fanelingelenana ny setroka, ny rafitra fiarovana mifototra amin'ny hazavana dia havaozina amin'ny laser infrared, nihatsara ny vokany.
Ny rafitra fiarovana mifototra amin'ny hazavana dia manana kilema lehibe kokoa:
Ny taham-pivoarana diso, ny vorona, ny bibikely, ny ravina latsaka, ny sampana mikorisa dia mety miteraka fiheverana diso;
Fiarovana kely. Noho ny toetran'ny fiparitahan'ny tsipika momba ny rafitra fiarovana ny hazavana infrared / laser dia tsy afaka mametraka faritra voafetra voafetra ihany, mora ny ampitain'ny mpiditra an-tsokosoko;
Tsy misy fahaiza-manao lavitra.
Ny rafitra fisorohana karazana tariby dia vokatra matotra kokoa ankehitriny, indrindra ny programa tariby vibration, programa cable tariby, programa tariby vibration. Ny tariby mihetsiketsika dia apetaka amin'ny làlam-by mba hahatsapana fidirana an-tsehatra amin'ny tsindry sy fanerena.
Ny tariby eakage dia matetika milevina eo amin'ny 1 metatra ambanin'ny tany, ny fisehoana tsy misy soritra ny zava-tsoa miafina. Ireo programa roa ireo dia tsy misy fiasan-toerana. Rehefa miseho ny fitsofohana dia tsy azo faritana ara-potoana ny teboka fidirana ary tsy azo atao ny mandray fepetra hijanonana amin'ny fidirana an-tsehatra. Ankoatr'izay, satria ny tariby mihetsiketsika dia mora tohina amin'ny hovitrovitra ary miovaova ny fihenan'ny tariby amin'ny hafanana, avo ny tahan'ny fanairana fanairana ary avo ny vidin'ny fikolokoloana. Misy ny famoahana ny fananganana tariby sarotra, ny tany aorian'ny olana momba ny rano misimisy izay misy fiantraikany amin'ny asa.
Ny tariby mihetsiketsika dia vokatra vaovao ampiasaina amin'ny taona faramparany, raha ampitahaina amin'ireo karazana tariby roa etsy ambony, tariby vibration amin'ny fandrefesana lavitra.
Ny orinasa dia mipetraka ao:
Ny tariby mihetsiketsika dia napetraka eo amin'ny fefy ihany, ny lafiny ratsy dia ny faritra miaro dia kely, mora ny mamantatra ary mandalo.
Ny radar-onjam-peo milimetatra ao amin'ny sensor radio dia teknolojia vaovao novolavolaina tato anatin'ny taona vitsivitsy, ny andraikitry ny fitsipika dia ny fametrahana sensor roa miaraka amin'ny sakany sy haavon'ny rindrin'ny radara milimetatra, raha vao hita ilay zavatra. avy hatrany. Ny fihemorana lehibe amin'ny radarin'ny onjam-milimetatra mankany amin'ny sensor radio dia ny tsy fahafahany manome fampahalalana momba ny halaviran'ny teboka fidirana, matavy be ilay balizy, ary voafetra ny isan'ny fampiharana. Voakasiky ny tsimparifary eny ambonin'ny tany sy ny sampany mihozongozona, ny tsimparifary sy ny rantsana dia mila diovina tsy tapaka.
Tsy misy vahaolana tsara ho an'ny rafitra fitandremana ny filaminana isam-paritra. Amin'ny alàlan'ny fakan-tsary, ny sehatry ny fakantsary misy ny fakantsary, ny fakantsary manondro ary ny anton-javatra hafa, ny haitao horonantsary dia tsy afaka manome fotoana tena izy, fanaraha-maso ny faritra rehetra, fanekena sary ny teknolojia fanairana mandeha ho azy misy fetrany lehibe, mbola tsy afaka manara-maso bebe kokoa.
Amin'ny ankapobeny, ny tsirairay amin'ireo rafitra fiarovana etsy ambony dia misy tombony sy fatiantoka ary tsy misy amin'izy ireo afaka mamaha ny rehetra
Fahatelo, ny radar fiarovana milimetatra vaovao.
Ny fangatahana tsena dia afaka mampiroborobo ny fampandrosoana teknolojia. Mba hanonerana ireo tsy fahombiazan'ny rafitra etsy ambony, radar millimeter-onja miadana mankany amin'ny sehatry ny filaminana. Rehefa nilatsaka ny fandrosoan'ny teknolojia sy ny vidin'ny fitaovana, dia tsy olana ho an'ny filaminana intsony ny radara-onjam-peo ampiasaina amin'ny miaramila tany am-boalohany.
Ny fitsipiky ny fiasan'ny radar milimetatra: Mamindra onja elektromagnetika tsy tapaka ny radara. Ao amin'ny faritra detection, ny onja elektromagnetika dia miverina miverina amin'ilay zavatra. Taorian'ny nahazoan'ny radar ny famantarana, dia mandalo andiana fanodinana izy io hanodinana ny halavirana, ny hafainganana ary ny làlan'ny zavatra entina ao amin'ny onja elektromagnetika miverina amin'ny alalàn'ny serasera, mifehy ny jiro atosiky ny mpampiantrano, sirenety ary fitaovana hafa. fambara fanairana amin'ny feo sy hazavana, fanairana momba ny fahitana fidirana.
Ny radar fiarovana milimetatra vaovao dia mampiasa teknolojia radar mialoha ny fanairana mba hahatratrarana ny faritra fanaraha-maso iray manontolo nefa tsy misy fanelingelenana ny fandrakofana iray manontolo, miaraka amin'ny habe kely, lanja maivana, azo itokisana ary toerana jamba lavitra, tsy misy jamba hafainganam-pandeha, avo -Vahaolana farany, fampisehoana fanoherana tsara ny jamming sns. Raha ampitahaina amin'ny rafitra fitifirana infrared, ny radar fiarovana dia omena haavo sy hatevin'ny rindrin'ny radara onjam-peo mitohy, tsy misy ny fitrandrahana sy hitsambikina. Raha ampitahaina amin'ny rafitry ny tariby, ny radar fiarovana dia tsy ny toerana kendrena miditra ihany fa ny mahazo ny hafainganana, ny lalana, ny halavirana ary ny angovo momba ireo zavatra mihetsika eo amin'ny sehatry ny fanaraha-maso ary manara-maso ireo banga ao anatin'ny 24 ora. Ary miaraka amina fakantsary haingam-pandeha haingam-pandeha miaraka amina tara-pahazavana famenoana lasopy, azo tratra ny fanarahana kendrena, tsy vitan'ny mahita avy hatrany ilay teboka fidirana an-tsehatra, fa hahazo vaovao tsara ho an'ny mpitandro ny filaminana koa hamaly haingana mba hisorohana lozam-pifamoivoizana.
Ny tombony azo amin'ny radar-onja-onjampeo dia ny radara tokana afaka mamorona rindrina radar-onja mitohy milimetatra misy sakany sy haavony ampy izay zavatra rehetra misy velaran-tany omena azy dia azo jerena manerana ity rindrin'ny radara milimetatra ity. Ny radar milimetatra-onjampeo azo ampiasaina ankehitriny, ny detection dia hatramin'ny 1Km, ho an'ny toeram-pitrandrahana solika, sahan-tsolika, terminal ary orinasa lehibe hafa dia manana rafitra fiarovana, ny tombony miharihary.
Andiana radar-onjampe-milimetatra, radara-onjam-peo misy milimetatra misy fahaiza-manao fanaraha-maso isam-paritra, ---- radara fanaraha-maso ny elektromagnetika, ity karazana radara ity dia manana antena mampita, antena marobe mandray, ny onja elektromagnetika ampitaina hita amin'ny kendrena refesina dia hita taratra miverina hahatratra ny samy hafa fandraisana antennas manana fotoana fahasamihafana, amin'ny alàlan'ny solosaina mpamaky fampahalalana, azonao atao ny mandrefy ny refy refesin'ny fampahalalana kendrena. Ity fampiasa ity dia tena ilaina amin'ny sehatry ny fisorohana sy ny fifehezana, ny sary an-tsary dia toy izao:
Sampana iray hafa amin'ny radar detection area dia ny ---- scanner mekanika an'ny radar millimeter-onja. Ny radar dia radar zoro voafaritra miorina amin'ny fihodinan'ny 360 ° fihodinana, ny radar tarihan'ny rafitra fanaraha-maso amin'ny fomba iray. amin'ny zoro fihodinana ilaina, hanaraha-maso ny faritra voatondro ho an'ny mpampiasa. Raha ampitahaina amin'ny radar fanaraha-maso ny faritra elektro-scan voalaza etsy ambony, ny radara fanaraha-maso mekanika dia manana halavirana detection lavidavitra kokoa sy zoro fitadiavana lehibe kokoa, ary azo ovaina tsara, izay tena mety amin'ny fiarovana ireo faritra be seho sy ny fanondranana an-tsokosoko. ny sisintany sy ny morontsiraka.
Ny tena mampiavaka ny radar-onjam-peo:
Famantarana faritra tsy misy fijanonana mandritra ny 24 ora ao amin'ny faritra detection;
Famantarana marobe miaraka amin'ny tanjona marobe ao amin'ny faritra detection;
Ny fivoahan'ny fotoana tena izy amin'ny valin'ny detection ho an'ny rafitra handrafetana fakantsary fakana horonantsary tena izy;
Tsy voakasiky ny setroka, vovoka, hazavana ary hazavana;
Tsy voakasiky ny orana sy ny oram-panala;
NSR100W dia radar an'ny onjam-piarovan'ny faritra tokana tena mahomby K-band, famaritana hatrany amin'ny 160 metatra (fiara), ny fampiasana fahasarotana avo lenta amin'ny maodelim-panao FMCW, dia afaka mamantatra ny halaviran'ireo tanjona kendrena. , fampahalalana amin'ny zoro, miaraka amin'ny fahamendrehana avo lenta kokoa.
NSR100W dia mampiasa teknolojia dingana-mandroso mandroso, miaraka amin'ny fahaizan'ny vahaolana amin'ny zoro avo lenta, ny halavan'ny 160 metatra toratelo amin'ny habakabaka, ny fidirana amin'ny famaritana kendrena, fanairana. Amin'ny alàlan'ny alàlan'ny fanodinana signal back-end sy algorithms fankasitrahana ny lamina, sivana tsara ny lasibatra diso toy ny hazo.
Fahefatra, ohatra azo ampiharina amin'ny fampiharana
Fanaraha-maso ny fitoeran'ny tank
Tandindomin-doza ny tobin-tsolika, singa famokarana iray lehibe. Mora mirehitra ny solika, nefa misy lanja ara-toekarena avo koa, noho izany dia ilaina ny fiarovana ny toeram-pitrandrahana solika.
Radar fanaraha-maso ny toerana misy ny solika eto amin'ity toerana ity miaraka amin'ny fepetra takiana amin'ny fiarovana. Ahoana ny fomba fiasan'izy io: Rehefa misy olona mampiahiahy miditra tsy ara-dalàna ny faritry ny tanky, dia mahita olona mampiahiahy ny radara ary handefa ny zoro, ny halavirana ary ny lalan'ny dia mankany amin'ny foibe fanaraha-maso ary hitondra ny fakantsary mba hahatsapa ny fifandraisana misy eo amin'ny fanaraha-maso amin'ny alàlan'ny modely fanaraha-maso maharitra. mba hahitanao haingana ny faritra Alarm ary atsipazo amin'ny monitor ilay horonan-tsary. Ny fifandraisana amin'ny radara sy horonan-tsary, aorian'ny fanodinana andiany, antsoy ny angona ao anaty tahiry ary asio fampandrenesana toerana misy azy manokana, raha toa kosa ny polisy eo amin'ny efijery dia mampiseho ny toetoetran'ny tranga niseho, ny fotoana, ny drafitry ny tranokala ary ny fampahalalana hafa azo arahi-maso amin'ny tena izy fotoana Fanaraha-maso ny toe-draharaha filaminana ao amin'ny faritra, ny singa maoderina dia tsy maintsy manana rafitra feno fanairana manan-tsaina feno.
Faritra manodidina ny fonja hisorohana
Ny fonja, toy ny toerana itazonana ireo gadra mpanao heloka bevava, dia iray amin'ireo lafiny manan-danja indrindra amin'ny fitantanana ara-tsosialy. Tena sarotra ny mitazona sy mitantana. Raha vantany vao misy jailbreak dia hiteraka fahasimbana lehibe izany ary hisy fiantraikany amin'ny filaminana sy fitoniana ara-tsosialy. Noho izany, fepetra fiarovana hentitra no fiarovana voalohany amin'ny fitantanana ny fonja.
Ny radar fiarovana perimeter dia afaka mifehy ny fifandraisan'ny fakantsary, manara-maso ny rindrina ao anatin'ny tsipika fampitandremana isaky ny 100 metatra (miankina amin'ny tontolon'ny tranokala hisafidianana modely samihafa) hametrahana radara manodidina ny fampiasana ny fitsipiky ny radara onjam-peo milimetatra hamorona 100 metatra ny halavany, 6 metatra ny haavony, rehefa miditra ao amin'ny faritra fampitandremana ireo olona mampiahiahy na miampita ny tsipika fampitandremana, ny radara dia mandrefy ny halavirana, ny lalana ary ny hafainganan'ny olona mampiahiahy avy ao amin'ny radara ary mandefa azy ireo any amin'ny foibe fanaraha-maso any ambadiky ny tambajotra fifandraisana. Ny foibe fanaraha-maso Vahao ny elanelana, ny hafainganana ary ny làlan'ny olona mampiahiahy avy amin'ny radara, ary fehezo ny solomaso fakan-tsarin'ny fakantsary arakaraka ny fampahalalana lavitra mba hahafahana misambotra mazava tsara ny faritra misy ireo olona mampiahiahy. Ny foibe fanaraha-maso miaraka amin'izay miaraka amin'ny fifandraisana misy eo amin'ny foibe fanaraha-maso, ny fampahalalana mifandraika nalefa tany amin'ny foibe fanaraha-maso, ny sehatra rindrambaiko dia hipoitra avy hatrany ny sarintany elektronika fanairana, sary an-tsary mampifandray, ary amin'ny mpanara-maso voatondro marobe miaraka amin'ny pop-up iray ihany Fandraisana an-tsary, toerana sy rohy fanaraha-maso horonantsary toerana misy fanairana ary afaka manara-maso ireo sary ao amin'ilay faritra hivadika ho azy amin'ny efijery lehibe.
Manantena ny ho avy
Ny radar fiarovana ve mipoitra eo amin'ny tsenan'ny fiarovana fomba teknika vaovao? Shenzhen Security Expo dia nahita microcosm fotsiny izahay, ny detection radar amin'izao fotoana izao dia efa be mpampiasa an-trano sy any ivelany, miaraka amin'ny PTZ fanaraha-maso nomerika avo lenta, takiana fiarovana avo lenta ny perimeter manome vahaolana mahomby kokoa ny tsena. Ao amin'ny seranam-piaramanidina, seranan-tsambo, lavadrano, solika herinaratra, fifamoivoizana an-dalamby, poste am-ponja ary tsena fiarovana avo lenta hafa dia manana fahamatorana sy be mpampiasa amin'ny tsena sivily maro kokoa, ny fahitana radara ary ny fiarovana dia manana vinan'ny tsena malalaka. Mino aho fa fanombohana fotsiny ny Expo Security Security Shenzhen, ny vahaolana fiarovana mifototra amin'ny radara no ho teboka teknolojia avo indrindra manaraka, andao isika hanantena mialoha!
PREV: Traikefa farany: nanambara ny Nanoradar ARS 408-21 Radar Test Software NSM Fitaovana, fitsapana maimaim-poana
MANARAKA : Tale Jeneralin'ny teknolojia Nanoradar, Zhou Quentin: serivisy fandefasana radara mikraoba milimetatra 24GHz amin'ny tsena efatra lehibe kendrena